RaspiReader, Raspberry Pi3ကိုအသုံးပြုသောလက်ဗွေဖတ်စက် အခမဲ့ဟာ့ဒ်ဝဲ
RaspiReader, လက်ဗွေဖတ်စက် Raspberry Pi3ကိုအသုံးပြုသည်
နောက်မျိုးဆက်သစ်စမတ်ဖုန်းများနှင့်မိုဘိုင်းဖုန်းများပေါ်လာပြီးနောက်သူတို့၏ပရောဂျက်များသို့မဟုတ် gadgets များတွင်လက်ဗွေဖတ်စက်ကိုထည့်ရန်ကြိုးစားသူများစွာရှိသည်။ ၎င်းသည်မြင့်မားသောလုံခြုံရေးအဆင့်လိုအပ်သောစီမံကိန်းများသို့မဟုတ်အသုံးပြုမှုများအတွက်အလွန်အသုံးဝင်သည်။ ဒါကြောင့်ထုတ်လုပ်သူကဒါပဲ Joshua J. Engelsma သည်လက်ဗွေဖတ်စနစ်ကိုတိုးတက်စေရန်နှင့်တည်ရှိရန်အတွက်ရှိသည့် free hardware အားလုံးကိုအသုံးပြုရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်.
ထို့ကြောင့်ယောရှုသည်အတုအယောင်များနှင့်မှားယွင်းသောထောက်လှမ်းမှုများအားသက်သေပြနိုင်သည့် fingerprint reader တစ်ခုကိုဖန်တီးရန်ကြိုးစားနေသည်။ သို့သော် Free Hardware စီမံကိန်းများအတွက်အသုံးပြုသူများသည်အခြေခံနှင့်လုံးဝလွတ်လပ်သောလက်ဗွေဖတ်စက်ကိုဖန်တီးနိုင်သည်။
ဒါကဘယ်လိုဖြစ်ပါသည် RaspiReader ပရောဂျက်ကင်မရာများစွာ၊ ဖန်၊ LED မီးများနှင့် Raspberry Pi3တို့ပါရှိသော ပြီးပြည့်စုံပြီး လုံခြုံသော လက်ဗွေဖတ်စနစ်ကို ဖန်တီးသည့် ပရောဂျက်တစ်ခုဖြစ်သည်။
နောက်ပိုင်းတွင် လက်ဗွေရာများကို သိမ်းဆည်းရန်သာမက၊ အသုံးပြုနိုင်သော လက်ဗွေများကို လုပ်ဆောင်ရန်နှင့် ၎င်းသည် မူရင်းလက်ဗွေအစစ်ဟုတ်မဟုတ် သို့မဟုတ် အတုအစစ်ဖြစ်ကြောင်း သိရှိနိုင်စေရန်၊. ထို့ကြောင့် Raspberry Pi သည် လက်ဗွေရာ၏ ပုံကို လက်ခံရရှိသောအခါ၊ ပရိုဂရမ်သည် ပုံတွင်ရှိသော အမှားများ သို့မဟုတ် ဖြစ်နိုင်ခြေရှိသော ခေါက်များကို ရှာဖွေကာ ၎င်းသည် အတုဖြစ်ကြောင်း ဖော်ပြသည်။
Joshua J. Engelsma သည် RaspiReader ပရောဂျက်ကို အသုံးပြုခဲ့သည်။ မစ်ရှီဂန်တက္ကသိုလ်အတွက် မင်းရဲ့တာဝန်တွေ ဒါပေမယ့် ကံကောင်းထောက်မစွာနဲ့ ဒီပရောဂျက်က အများသူငှာ ရရှိနိုင်ပါသည်။ဒါကြောင့် RaspiReader လိုမျိုး လက်ဗွေဖတ်စက်ကို Hardware ပိုင်းမှာသာမက Software ပိုင်းမှာပါ ဖန်တီးနိုင်ပါတယ်။ အဆိုပါ github repository ကို RaspiReader လုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုလုံးကို အလိုအလျောက်ဖြစ်စေသော python တွင်ရေးထားသော စာကြည့်တိုက်များနှင့် ပရိုဂရမ်အားလုံးကို ကျွန်ုပ်တို့ ရှာတွေ့နိုင်ပါသည်။
ဒီပရောဂျက်ရဲ့ စိတ်ဝင်စားစရာအကောင်းဆုံးက အဲဒါပါပဲ။ RaspiReader သည် အခြားသော အခမဲ့ ဟာ့ဒ်ဝဲ ပရောဂျက်များနှင့် အပြည့်အဝ လိုက်ဖက်ပါသည်။ဆိုလိုသည်မှာ၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် ၎င်းအား တံခါးဖွင့်ရန်၊ အင်တာနက်အသုံးပြုခွင့်ကဲ့သို့သော ဝင်ခွင့်များကိုဖွင့်ရန် သို့မဟုတ် ကျွန်ုပ်တို့တည်ဆောက်သည့် မည်သည့်ယာဉ်ကိုမဆို စတင်ရန် လုံခြုံရေးအဖြစ် ကျွန်ုပ်တို့အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ ပြီးတော့သင် သင်၏ RaspiReader ကိုတည်ဆောက်ဝံ့ပါသလား။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - အခမဲ့ဟာ့ဒ်ဝဲ » Raspberry Pi » RaspiReader, လက်ဗွေဖတ်စက် Raspberry Pi3ကိုအသုံးပြုသည်
3D ပုံနှိပ်ခြင်းကကမ္ဘာ့ကုန်သွယ်မှု၏ ၂၅ ရာခိုင်နှုန်းဆုံးရှုံးမှု၏အကြောင်းရင်းဖြစ်သည်